वर्षको अन्तिम दिन के भयो सुनचाँदीको मूल्य ? – hamrosandesh.com
वर्षको अन्तिमदिन मंगलवार (आज) नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
सोमवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ८९ हजार ६ सय रहेको थियो । आज सुनको मूल्य तोलामा १ सयले गिरावट आई प्रतितोला सुन ८९ हजार ५ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ८९ हजार ५० रहेको छ ।
सोमवारको तुलनामा मंगलवार चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले गिरावट आएको छ । सोमवार प्रतितोला चाँदीको मूल्य १२ सय ७५ रहेको थियो भने आज मूल्य गिरावट आइ प्रतितोला चाँदी १२ सय ६० कायम भइ कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
नयाँ बर्षमा मेगा बैंकको नयाँ व्याजदर, कति छ मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ?
मेगा बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको नयाँ व्याजदर घोषणा गरेको छ । बैंकले बैशाख १ गते (नयाँ बर्षको दिन) देखि लागू हुने गरि नयाँ व्याजदर घोषणा गरेको हो । बैंकले आज एक सुचना जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो ।
बैंकले सामान्य बचत खाताहरुमा ०.५० प्रतिशतदेखि ३.५० प्रतिशतसम्म व्याज दिने बताएको छ । यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत र संस्थागत तर्फ ६.७५ प्रतिशत व्याजदर दिने बैंकको भनाइ छ ।
यस्तै, बैंकले कर्जा तर्फ आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर व्याज लिने बताएको छ । हाल बैंकको आधारदर ६.६७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा कर्जाको प्रकार अनुसार बढीमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर व्याजदर निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बैंकहरुको कर्जा लगानी १७.२ प्रतिशतले वृद्धि
कोरोनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी उच्च देखिएको छ । कोभिड नियन्त्रणको लागि गत वर्षको चैतदेखि ४ महिना लामो लकडाउन खुकुलो भएसँगै चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि भने बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १७ दशमलव २ प्रतिशतले विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंकहरुको निक्षेप ११ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोभिड सुरु हुन अगाडि ८ महिनाको कर्जा विस्तार १० दशमलव एक प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २१ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि ८ महिनामा नै १७ प्रतिशत माथिले विस्तार भएको छ ।
कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत, घटेको ब्याजदर तथा ठूला मात्रामा गएको पुनर्कर्जाले गर्दा कर्जा विस्तार उच्च भएको छ ।